दरौँदी किनारमा मृत भेटिए जाइकाका कर्मचारी
जाइका नामक संस्थामा आबद्ध रही गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका ४ सिम्जुङ ढोडेनीमा जाइकाले संचालन गरेका निर्माण कार्यमा संलग्न मकवानपुर भैंसे ३ का ३५ वर्षीय लक्ष्मी माझीको शव दरौँदी नदी किनारमा फेला परेको छ।
२१ साउन आफ्नै साथीको छोरा अपहरण गरेर फिरौती माग्ने राजु विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। साथीकै छोरा अपहरण गरी ५० हजार फिरौती माग्ने राजुलाई प्रहरीलले शनिबार पक्राउ गरेको हो। राजु नै उक्त अपहरणको योजनाकार रहेका थिए।
झापामा स्वाइन फ्लूले दुई जनाको मृत्यु
१८ साउन, झापा - झापामा स्वाइनफ्लू रोगको सङ्क्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बिर्तामोड-४ निवासी ४७ वर्षीया अनितादेवी मित्तल र बिर्तामोड-१ निवासी ३७ वर्षीया मनिषा अग्रवाल रहेका छन् ।
किन पिच हटाएर ढुङ्गा बिच्छ्याईँदै छ पाटन ढोका क्षेत्रमा ?
ललितपुरको पाटन क्षेत्रमा भएको सडकलाई भत्काएर ढुङ्गा विच्छाउने काम धमाधम भइरहेको छ ।
परबास बाट युवराज थापाको पहलमा सिद्धारा गा. बि स वार्ड न:- ८ निबासी क्यान्सर पिडितको उपचारको लागि सहयोग रकम हस्तान्तरण
सिद्धारा गा. बि स वार्ड न:- ८ निबासी यम बहादुर बेल्यासे ज्यु उहाको उमेर करिब ७४ बर्षको हुनुहोदो रहेछ उहाँको बायाँ हातमा स- साना बिबिरा उठेर चिलाउदा चिलाउदै अहिले उहाको बायाँ हातमा माथी कुम देखि नारि सम्म ठुलो घाउ हुन पुगेको छ
निर्ममताको पराकाष्ठ,प्रेम गरेको भन्दै युवतीमाथि निर्घात कुटपिट(भिडियो)
कठमाडौं,साउन ५ – कथित तल्लो जातको युवकसँग प्रेम सम्वन्ध राखेको भन्दै एक युवतीलाई आफन्तले निर्घात कुटिपिट गरेका छन् ।
६ महिनाको उपचार पछि निको भै घर ।
श्रावण ३, अर्घाखाँची -अर्घाखाँची जिल्लाको तत्कालीन खनदह हाल मालारानी गाउँपालिका वडा नं. ३ खनदह काब्रेनेटा निबासी धनकला खनाल ६ महिनाको उपचार पछि आज घर फर्कनु भएको छ ।
२९ असार, दार्चुला - जंगली च्याउ खादाँ दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका-२ राप्ला ६ जना विरामी परेका छन् । उनीहरू मध्ये २ जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
नेपालको एउटा यस्तो गाउँ : जहाँ बाटो हिँडेको पनि पैसा तिर्नुपर्छ
असार २७, जाजरकोट- बाटो हिँडेको पनि पैसा तिर्नुपर्छ भन्दा तपार्इँलाई अनौठो लाग्न सक्छ। तर जाजरकोटको लहँको गेडेनीदेखि चिमिरे ओडारसम्मको बाटो हिंडेको पनि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
सुर्खेतमा दुर्लभ बन्यजन्तु रेडपाण्डाको छालासहित ३ जना पक्राउ
२० असार, सुर्खेत - जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दुर्लभ वन्यजन्तुको छालासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
दोलखामा पहिरोले घर बगाउँदा दुईको मृत्यु, दुई बेपत्ता
१४ असार दोलखा - भिमेश्वर नगरपालिका–९ लाकुरीडाँडास्थित कुतकुते भन्ने स्थानमा पहिरोले घर बगाउँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ।
यस्तो बन्दैछ काठमाडौं, अब सार्वजनिक बस चल्न छुट्टै लेन
काठमाडौं,असार १२- सरकारले काठमाडौंमा सार्वजनिक बस चल्ने छुट्टै लेन तोक्ने तयारी थालेको छ । सडक पछिल्लो समय बढ्दै गएकोको ट्राफिक जामले गर्दा सर्वसाधारणले हैरानी पाएपछि
बा १ ज ९८०९ नम्बरको माइक्रोबसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिदा जोरपाटीमा तीन जना घाइते
असार, काठमाडौं । काठमाडौंको बौद्ध जोरपाटीमा भएको खतरनाक दुर्घटनामा तीन जना घाइते भएका छन् । बा १ ज ९८०९ नम्बरको माइक्रोबसले सुरुमा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो ।
यसरी लिन सक्छ स्थानीय तहले नेपाल सरकारसँग ऋण
असार ८, स्थानीय तहले केन्द्र सरकारसँग ऋण लिन सक्ने कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ। ऋण लिनुपर्ने कारण र आधार उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयमा ऋण तिर्ने सीमा तोकेर स्थानीय तहले ऋण लिनसक्ने कानून प्रस्ताव गरिएको हो।
पहिरोले अबरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खुल्यो
७ असार, चितवन - वर्षासँगै खसेको पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड बिहान ७ बजेबाट सञ्चालनमा आएको छ